‘जन्डिस’ रोग या लक्षण ? सात भ्रम र यथार्थ, सक्दो सेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुस है - Taja Report
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैली‘जन्डिस’ रोग या लक्षण ? सात भ्रम र यथार्थ, सक्दो सेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुस है
July 11, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on ‘जन्डिस’ रोग या लक्षण ? सात भ्रम र यथार्थ, सक्दो सेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुस है
जन्डिसको उपचार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (एलोप्याथी)मा छैन भन्ने भ्रम फैलाएर, आफैँ यसको उपचार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या हाम्रो देशमा प्रशस्तै छ । ज्वरो आउँदा, टाउको दुख्दा, झाडावान्ता लाग्दा हामी डाक्टरलाई विश्वास गर्छौं । तर, त्यो विश्वास त्यसबेला डगमगाउँछ, जब कसैलाई जन्डिस हुन्छ । एलोप्याथीमा जन्डिसको उपचार हुँदैन भन्ने भ्रमले यसरी जक्डेको छ कि पढेलेखेकाहरू पनि यसैमा विश्वास गर्छन् । एकातिरबाट सोच्ने हो भने यो कुरा ठीक पनि हो । वास्तवमा जन्डिसको उपचार नै हुँदैन, न एलोप्याथीमा, न त आयुर्वेदमा, न होमियोप्याथीमा । उपचार त जन्डिस गराउने रोगको गर्ने हो । तर, एलोप्याथीमा त्यसरी जन्डिस गराउने रोगहरूको उपचार पक्कै हुन्छ । जस्तैः पित्तनलीमा ढुंगा छ भने त्यसले गर्दा जन्डिस हुन्छ । यस अवस्थामा आयुर्वेदिक औषधिले निको हुँदैन, बरू रोग गम्भीर हुन्छ । पित्तनलीबाट ढुंगा झिकेर मात्र यो रोग अनि जन्डिस निको हुन्छ ।
कसैको घरमा एक जनालाई जन्डिस हुनुपर्छ, त्यो घरको भान्छाबाट बेसार हट्छ, नुन, तेल, घ्यू खपत एकदम कम हुन्छ । माछा, मासु, अन्डाको प्रयोग केही महिनासम्मै हुँदैन । अरू फलफूल होइन, उखु र मेवा मात्र भरमार भित्रिन्छ । हाम्रो समाजमा जन्डिस हुनेबित्तिकै खाना बार्ने र प्रायः उसिनेर मात्र खाना खाने गलत चलन व्याप्त छ । कसैलाई क्यान्सरका कारण पनि जन्डिस हुन सक्छ । यो भन्नु पर्दैन कि क्यान्सरको बिरामीले खाना बार्दा रोग झन् जटिल बन्न पुग्छ । क्यान्सर मात्र होइन, खाना बार्दा जन्डिस गराउने अरू रोग पनि पौष्टिक तत्वको कमीले गर्दा जटिल भइदिन्छ ।